SP 11/Tranovato Rasalama Ambohipotsy – FJKM
SP 11/Tranovato Rasalama Ambohipotsy
Misokatra ny Tobim-pahasalamana Akany Rasalama
Manana ny Tobim-pitsaboany ny Fitandremana Tranovato Rasalama Martiora Ambohipotsy, mba hizarana soa ho an’ny hafa. Sady ahitana fitsaboana no misy fisorohana ny aretina ao amin’izany tobim-pahasalamana izany. Efitrano valo no misy ao aminy, toy ny efitrano fizahana, ny fitiliana, ny fitsaboana, ny fiterahana sy itoeran’ny mpiteraka, ny resaka maso, ny fanaovam-baksiny.
Mpiasa raikitra 7 no miasa ao anatiny, izay ahitana mpitsabo roa, mpampivelona roa, ary mpiasa hafa toy ny misahana ny fanadiovana telo. Vokatry ny fiaraha-miasa no nahafahany nanana fitaovana fitsaboana maro ary anisan’izany ny “concentrateur d’oxygène”, izay tena ilaina amin’izao fotoana izao.
Misokatra ny alatsinainy hatramin’ny zoma ny toerana ary manomboka mivoha amin’ny 8 ora maraina sy mikatona amin’ny 4 ora hariva aloha hatreto. Aoriana kely, ny fanirian’ny Tomponandraikitra, dia hisokatra 24 ora amin’ny 24 ora sy 7 andro amin’ny 7 andro.
Tsy ny mpianakavin’ny finoana ao amin’ny fiangonana ihany no raisin’ny Tobim-pitsaboana, fa ny mpiara-belona rehetra na ny manodidina tsy an-kanavaka ihany koa. Afaka manatona eny avokoa ny olon-drehetra.
Ny alakamisy 25 Novambra lasa teo no nanokafana tamin’ny fomba ofisialy izany toeram-pitsaboan’ny fiangonana izany. Tonga nanatrika izany ny avy amin’ny tomponandraikitry ny Foibe FJKM, ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM, Atoa RAKOTONINDRAINY Jaona, Mpitandrina, sy ireo olom-piangonana isan-tsokajiny; teo ihany koa ny avy amin’ny solontenam-panjakana toy ny avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamana sy ny Governoran’Analamanga. Anisany nitondra anjara biriky be dia be tamin’ny fananganana ny Akany sy ny fampitaovana tao amin’ny tobim-pahasalamana izao ny faritr’Analamanga. Nanohana ara-pitaovana ihany koa ny Masoivohon’i Allemagne.
Marihina, fa ny zoma lasa teo, dia nisy ny hetsika ara-pahasalamana nataon’ny Tobim-pitsaboana teny Ambohipotsy ho an’ny mponina. Fitiliana diabeta, tosidrà, homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza no natao tamin’izany.
SP AA 10/Fametrahana PS
FJKM Ankadivoribe Famonjena
SP 11/SA Soanierana
SP 11 / 25T maha-PS
SP Toamasina Vavahadin’ny Filazantsara (31)
SP SOFIA ANDREFANA (30)
SP MANDRIDRANO MPIAMBINA SOAVINANDRIANA ITASY (29)
SP MEVARANO MIRAY (26)
SP MIARINARIVO FAHAZAVANA (27)